[Jawaab:] Yaa taariikh madow: Ma Ilma Uurcad mise Xildhibaan Caasha Cabdalla
Thursday January 19, 2017 - 02:33:32 in Wararka by Super Admin
"Doqon baan tolnimo iyo aqoon wax istusaalayne Sokeeyahay u tookhdaa kolkay ficil timaaddaaye Shisheeyahana way taabacdaa waa temedisaaye Ninkii tuug ahaan jirey gacantuu yarehe tuujaaye Ilma Uurcad waxay tabanayaan taa la garan waaye Taari
"Doqon baan tolnimo iyo aqoon wax istusaalayne Sokeeyahay u tookhdaa kolkay ficil timaaddaaye Shisheeyahana way taabacdaa waa temedisaaye Ninkii tuug ahaan jirey gacantuu yarehe tuujaaye Ilma Uurcad waxay tabanayaan taa la garan waaye Taariikh madow yaa lahaa tiimbaraa koraye?"
Hordhac:- Bogga Allsanaag.com oo ay daadihiyaan Siciid Uurcad iyo Khaalid Uurcad ayaa muddo dheer ahaa mid loogu nacamleeyo hadba maammulka Puntland ka shaqeeya. Illaa iyo 2006-dii, duco iyo ammaan bay u hayeen Majeerteen, laakiin wax xil ah waa kuwaayeen. Waxay ku jaa’ifeeyaan sheekooyinka aan macnaha weyn xambaarsanayn dadka wax galka ah ee ka soo jeeda degaannada Maakhir. Dhowaan maqaallo lagu aflagaadaynayo Xildhibaan Caasha Cabdalla oo cinwaan looga dhigay Taariikh Madow ayaa indhahayga aad u soo jiitey. Waxa layaab leh Ilma Uurcad oo budhcadbadeed ahaa; maal gelin jirey; qoyskooda 6 ruux oo ka mid ah, oo uu ku jiro adeekood Barre, ay ku xidhan yihiin jeelka Norvork Virginia, Maraykan. Dadkan oo dabinkii Siciid iyo Khaalid geliyeen weli ku jira, xabsi daa’in iyo illaa 30 sano qaar lagu xukumay, cidi wax ma ka ogtahay? Waxa xusid mudan Marwo Xildhibaan Caasha Cabdalla, muddo ayay u dacwoonaysey dadkaa ehelka ah ee dabinka la geliyey sidii looga soo deyn lahaa xabbiska ay ku jiraan. Waxay ku booqatay jeelka wiilasha iyo odayga meeshaa ku xidhan. Waa la ogaa in Siciid Uurcad Garoowe u fadhiyey 6 sano MJ, laakiin loo diidey inuu xil ka qabto maammulka Puntland iyadoo lagu xiriirinayey falal budhcad badeednimo ah. Horaa loo yiri, "qofkii guri dhalo ah ku jiraa, deriska yuu dhagxin,” waa arrin daaha ka qaadaysa qoraalkaygani bal cidda ‘taariikh madow’ in wax layska weydiiyo.
Kolka hore, Xildhibaan Caasha oo lagu aflagaadeeyey qoraalkaas bal aan taariikhdeeda yar milicsanno. Xildhibaan Caasha Cabdalla muddo 12 sannadood ah ayay ka tirsanayd Baarlammaanka Soomaaliya 2000 – 2012-kii. Muddadaa iyada ah, waxay ahayd shakhsi ku caana xalaalnimo, waddaninnimo iyo u doodidda degaanka ay ka soo jeeddo ee Maakhir iyo guud ahaan Soomaalida. Iyada iyo Cawad Cashara waxay taariikhda ka galeen baal dahaba. Waxa tusaale kuu ah, maalinkii laga beddeley baarlammaanka ayaa u dambeysey cid dambe oo u doodda xaquuqda dadka reer Maakhir. Waxaynu aad u xasuusannaa dagaalkii iyo dedaalkii ay u gashay in kuraasta baarlammaanka reer Maakhir loo kordhiyo, iyadoo lagu aammusin jirey reer Maakhir 3 kursi, sidii Carta lagu ismay. Shirkii 2004-ta ee Embaghathi, Kenya ka dhacay, ayay xusul duub iyo dedaal u gashay in dulmiga reer Maakhir saaran laga qaado, iyadoo gudbisey in reer Maakhir xaq u leeyihiin 8 xildhibaan, aakhirkiina markii UN-ta iyo beesha caalamku arrinka galeen, laga dhigay 5 xildhibaan. Waxan si dhab ah xasuusannaa iyada iyo xukuumadihii dalka soo maray, weliba Cawad Cashare oo marwalba ku mawqif ahaa, ay dedaal ugu muujinaysey in marwalba dadka reer Maakhir xaquuqdooda helaan. Waxan soo qaadan karnaa dagaalkii Majayahan 2006-2009-kii macdanta Dhalan iyo Majayahan ka billowday. Wakhtigaas Xildhibaan Caasha iyo Cashare waxay ka sheegganaayeen warbaahinta maxalliga iyo tan caalamiga ah iyagoo xukuumaddii Cadde Muuse ee malaysiyada degaanka dagaalka kula jirey, daaha ka rogey. Aakhirkiina markii tiro dad ahi dhinteen, Puntland meesha dib uga soo guratay. Arrintaasi guul weyn bay ahayd oo ay soo hooyeen Cashare iyo Caasha Cabdalla. Walo markii dambe arrintii dantay, loogu tiimbareeyey degaannadii colaaduhu ka dheceen mid argagixiso salka dhigatay, mashruuca Galgala noqday mid looga aar gudanayey beesha Warsangeli, arrintaa dad badan oo ah siyaasiyiinta dambe ayaa gacan ku siiyey Majeerteen inaan degaanno Warsangeli mashruuc ka dhigtaan, oo adduunka lacag uga raadsadaan. Mashruucaasi wuxu ku dambeeyey Qandala ileyn waatii hore loo yiri, "bud walaal ha qodin, haddaan qoddidna ha dheerayn, ku dhici doontaana ma ogide,” odhaah Soomaaliyeed. Maanta Boosaaso, Qandala, Qardho, Garmaal, Suuj iyo Garacad ayaa noqday .